Duqayn ka dhacday gobalka shabeelaha hoose – Radio Daljir
Febraayo 24, 2019 6:52 b 0
Diyaarado dagaal ayaa xalay Saqdhii dhexe waxa ay duqeymo dhinaca cirka ah ka geysteen saldhigyo ay Ururka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Illo Xog-ogaal ah ayaa daljir waxa ay u sheegeen in diyaaradaha ay xalay duqeeyeen Saldhigyo Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada Owdheegle,Janeele iyo Kuunya-Barrow oo dhamaantood ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Weli macada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha xalay diyaadaraha ay la beegsadeen saldhigyo Al-Shabaab ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobnolka Shabeellaha hoose,balse dad ku sugan Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen jugta gantaalada ay diyaaradaha wax ku duqeynayeen.
Al-Shabaab oo duqeymahaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in diyaarado dagaal oo duqeeyay deegaanka Kuunya-Barrow ay ku geeriyoodeen dad Shacab ah oo gaaraya ilaa saddex ruux,hayeeshee majiraan warar madax banaan oo xaqiijinaya.
Inta badan degmooyinka ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ayaa waxaa duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliya diyaarado laga leeyahay Mareykanka wallow weli aysan war ka soo saarin duqeymihii xalay ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose.